Yay ahaayeen abuurayaashii astaamaha ugu caansan? | Abuurista khadka tooska ah
Yay ahaayeen abuurayaashii astaamaha ugu caansan?
Waa maxay aqoonyahannada ku qarsoon astaanta ugu caansan xilligeenna? Muxuu ahaa macnaha guud ee abuurista qaybaha guusha ee taariikhda sumadda sida? Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xulasho ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan iyo shirkadaha sanadihii tobnaad xukumayay suuqyada waaweyn. Dhismooyinka aan fiicnayn ee ay soo saareen caqli-yahanno waaweyn sida Milton Glaser ama xitaa Salvador Dalí.
Waan ogahay inay jiraan waxyaabo badan oo calaamadeyn oo calaamadeyn ah oo aan daboolka ka qaadi doono waana hubaal inaan gadaal ka dabooli doonno Hadda waxaan kaaga tagayaa lix ka mid ah taas qashin ma laha.
4 Waan jeclahay New York
Qiyaastii 1994 Federal Express ayaa u xilsaartay Landor Associates inay dib u qaabeeyaan astaanta shirkadda. Richard Runyan wuxuu mas'uul ka ahaa abuuristiisa qiyaastii 1973 ilaa waqtigaas wixii ka dambeeyayna wuxuu ahaa quraafaad adduunka ka mid ah naqshadeynta iyo tusaale loo soo qaatay isticmaalka saxda ah ee meel bannaan. Astaantan ayaa ku guuleysatay in ka badan 40 abaalmarinno naqshadeyn ah waxaana loo doortay sidii mid ka mid ah siddeeddii astaamo ee ugu fiicnaa afartii sano ee la soo dhaafay oo ku saabsan sannad-guurada 35aad ee gaarka ah ee arrinta Iconography American ee majaladda Rolling Stone. Nidaamkii abuuristu aad buu u dhib badnaa oo in ka badan laba boqol oo suurtagal ayaa la tuuray illaa kii ugu habboonaa laga helo. Maamulaha FedEx ayaa isla markiiba arkay fallaarta u dhexeysa E iyo X.
Kadib markay xajka u baxeen Santiago de Compostela, qoyska Graham waxay go'aansadeen inay dejiyaan astaanta Shell of Santiago, inkasta oo ay ku jirtay isbeddello sannadihii la soo dhaafay oo ay la qabsanaysay isbeddellada naqshadeynta garaafka. Jilaakiisa? Raymond Loewy, oo ka mid ah wershadaha ugu wanaagsan xilliyadan dambe, gaar ahaan 1971 kii oo xogtaan oo dhan ku xisaabtamay si loo horumariyo muuqaalka shirkadeed ee mid ka mid ah shirkadaha ganacsiga ugu muhiimsan qarniga XNUMX-aad. Dhinac wuxuu lahaa tixraaca Concha de Santiago iyo dhanka kale xiriirada xoogan ee jira ee Spain, wax ka muuqday xulashada casaanka iyo jaallaha.
Markay ahayd 1971 sumaddii uu aasaasay Phil Knight waxay qaadatay magaca Nike oo lagu sharfayo ilaahadda Griiga ee guusha. Astaanteeda waxaa soo saaray arday naqshadaysan oo la yiraahdo Carolyn Davidson oo raadineysa firfircooni (shuruudda kaliya ee Knight weydiisatay inay la socoto sawirka astaanta) ay soo saartay astaan ​​ku saleysan garabka ilaah Griig. Markii hore Phil si aad ah uguma qancin natiijada, xitaa wuxuu dhahay "jacayl uma hayo astaanta, laakiin waan la qabsan doonaa."
Waan jeclahay New York
Ragga weyn ee Milton Glaser wuxuu astaanta u sameeyay nooc hieroglyph ah oo ka kooban xarafka weyn ee I, waxaana ku xigay qalbi cas oo ka hooseeya xarfaha waaweyni ee N iyo Y oo ay ku qoran tahay font typewriter American ah. Waxay ahayd 1977 markii William S. Doyle oo ka tirsan Waaxda Ganacsiga ee Gobolka New York uu shaqaaleeyay hay'adda xayeysiinta ee Wells Rich Greene si ay u horumariso olole suuqgeyn ah oo loogu talagalay Gobolka New York. Waxay ahayd markii Glaser u muuqday inuu ka shaqeynayo ololaha oo uu si toos ah uga shaqeynayay muuqaalkiisa. Natiijadu waxay noqotay guul run ah oo sii socota iibinta ilaa maanta. Fudeydkiisa iyo xarrago macnaheedu waa inaan isla markiiba la kaashan karno New York oo aan u qaadanno inay tahay mid aad u fudud in la aqoonsado lana midoobo sumadda.
Waa mid ka mid ah macmacaanka ugu caansan adduunka astaantiisuna way ka yaraan kartaa. Xaqiiqdii waa mid ka mid ah waxyaalaha ku xeel dheer duurkayagii qarnigii la soo dhaafay. Dhammaantood waxay bilaabmeen qiyaastii 1959 markii Enric Bernat oo asal ahaan ka soo jeeda Catalan uu aasaasay shirkadda wax soo saarta ee Soo saare Bernat wuxuuna lahaa fikrad qurux badan ka dib markii uu u kuurgalay sida carruurtu gacmahooda ugu wasakheeyeen markasta oo ay cunaan nacnac. Abuurahayagu wuxuu go'aansaday inuu ul ku dhajiyo nacnaca oo uu sidaas u suuq geeyo, sidan oo kale wuxuu nacnac ugu beddelayaa alaab nadaafad badan iyo suurtagalnimada inuu ku raaxeysto isaga oo aan dhab ahaan liqin. In kasta oo markii hore ay heshay magaca Chups oo keliya, tani way is beddeshay markii xayeysiiska raadiyaha ee kor u qaaday uu dhaho "Chupa Chups" tan iyo markaasna goobtan ayaa loogu magac daray dhagaystayaasheeda oo bilaabay inay ugu yeeraan Chupa Chups. Waqtigan xaadirka nacnaca ayaa laga iibiyaa adduunka oo dhan laakiin xaqiiqda ugu xiisaha badan ayaa laga yaabaa in laga yaabo in calaamaddan ka dambeysa ay tahay mid ka mid ah kooxaha waa weyn ee adduunka farshaxanka, Salvador Dalí weyn. Ilaa 1969kii shirkaddu waxay caawimaad ka raadsatay maskaxda caqliga reer Catalan iyada oo loo marayo khidmadda milyaneerka ah waxay ku wareejiyeen sumadda. Waa wax cajiib ah in la ogaado in astaantaani Hal saac oo shaqo ah ayaan u qaadaa fanaanka waxaana lagu dhex isticmaalay midabada calanka Isbaanishka. Wuxuu sidoo kale fursad u helay inuu abuuro qaab wareegsan oo si fiican loogu habeeyay daboolka caramel oo markaa abuuraya matalaad awood leh oo ku habboon badeecada.
Waxaa ka dambeeya astaanta mid ka mid ah shabakadaha telefishanka ugu muhiimsan maanta Gerard huertasidoo kale naqshadeeye kaas oo gadaashiisa ku leh faylalka layaabka leh. Waana taas, in dhammaan naqshadeeyayaasha qaabdhismeedku aysan suurtogal u ahayn inay xirfaddooda ku dabaqaan meelaha isaga la mid ah. Waxa ka mid ah hal abuurkiisa waawayn calaamadaha shirkadaha sida Eternity ee Calvin Klein, MSG Network, CBS Records Masterworks logo, The Atlantic Monthly ama PC Magazine. Ma iloobi karno in isagu laftiisu soo saaray mid ka mid ah astaamaha ugu caansan ee muusigga: ACDC.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Yay ahaayeen abuurayaashii astaamaha ugu caansan?
Raadinta hyperrealism ee biyo-biyoodka Steve Hanks
Koorso Fiidiyow oo bilaash ah oo ku saabsan Adobe Dreamweaver CC